Trisquel, kugovera KWEMAHARA kwakazara neSpanish mavambo | Linux Vakapindwa muropa
Trisquel iko kugoverwa kweGNU / Linux kunotsigirwa uye kunotsigirwa neFree Software Foundation. Izvi zvinoreva kuti pamusoro pekuti iine kernel yeLinux, kugovera kwacho hakuna maaraibhurari, zvirongwa uye madhiraivha ane marezinesi akasarudzika kana marezinesi asingapindirane nerezinesi yeGNU inosimudzirwa uye inotsigirwa neFree Software Foundation.
Kuwedzera kune izvi, iko kugovera kunofanirwa kunge kune software yemahara mune ayo ekuchengetera, chimwe chinhu icho zvakare Trisquel. Mune ino kesi, Trisquel haisi kugovera kwakagadzirwa ex novo asi asi kugovera kunobva pane kumwe kugovera, zvinoshamisa kuti ine software yepamutemo. Tiri kutaura nezveUbuntu, iyo yekuparadzira base yaTrisquel.
Trisquel ine akati wandei vhezheni yakanangidzirwa kumapuratifomu akasiyana uye / kana zvikwata zvine zviwanikwa. Ivo vese vanochengetedza yavo chikamu chemahara kugovera uye kunyangwe paine hwaro, Trisquel anoremekedza zvizere izvi zvinodiwa.
Trisquel iko kugovera kweSpanish kwakatangira kunyangwe ichiwanikwa mumitauro yakati wandei. Iyo yazvino vhezheni inonzi Trisquel 8 Flidas, vhezheni iyo yakavakirwa paUbuntu LTS uye ine MATE seyakagadzika desktop. Iko kusarudzika kushoma uye zvese zvine chekuita nezvirongwa zvine zvinhu zvevaridzi. Muenzaniso weiyi ndeyeMozilla Firefox inonyangarika kubva mukuparadzira uku kugadzira forogo iyo yemahara zvachose.
LibreOffice iri mukugovera pamwe nePidgin uye GIMP. Dambudziko kana kuti, musiyano zvine chekuita neUbuntu MATE uri mumakodhi. Multimedia codecs inoremedza kana muridzi uye inokonzeresa kugoverwa kwakawanda kweFSF kuve nematambudziko neiyo multimedia chimiro. Trisquel chete ine emahara macodec ayo anoita kuti mafomati mazhinji asashande, kunyangwe isu tichifanira kutaura kuti izvi zvinogadziriswa nekuwedzera iyo Ubuntu zvinyorwa uye nekuzviisa kuburikidza nazvo. Ehezve, isu ticharega kuve neyakagozha yekugovera. Izvo zvinoitika nemamwe mafirita eGIMP, mafirita anogona kunge ari ehupfumi uye zvichipesana nehungwaru hwekugovera.
Trisquel 8 Flidas inouya neMATE sedesktop yakasarudzika, yakakwana uye isina kurerukirwa imwe nzira izvo zvinotitadzisa kunetsekana nezvirongwa zvinoshandisa maraibhurari eGTK3. Izvo zvinouyawo neMATE Tweak, chishandiso chikuru chishandiso icho chichatibatsira kugadzirisa Trisquel pasina kuisa yechitatu-bato zvirongwa.
1 Maitiro ekuisa Trisquel pakombuta yedu?
2 Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa Trisquel?
Maitiro ekuisa Trisquel pakombuta yedu?
Kuisa Trisquel pakombuta zviri nyore kwazvo asi hazvisi zvevanhu vese. Kuva zvachose Yemahara kugovera, Trisquel haishande. Naizvozvo, chekutanga pane zvese isu tinofanirwa test Kurarama CD kuparadzirwa, izvi zvichatibvumidza ziva uye uzive izvo zvinhu zvinoshanda uye ndezvipi zvinhu zvisingashande kubva pakombuta yedu mukugovera. Iyo inhanho yakakosha nekuti kana tikasvetuka, tinogona kuzviwana tiri mumamiriro ekuva nekombuta neTrisquel asi tisina Indaneti kana komputa isingashande zvakajeka, nezvimwe.
Asi izvi zvisati zvaitika, isu tinofanirwa kutanga tagadzira iyo pendrive ine iyo Trisquel ISO mufananidzo. Kune izvi tinogona kushandisa chishandiso etcher kana isu tinogona kungoshandisa Unetbootin kana tikasarudza chishandiso chekare. Mushure mekugadzira iyi pendrive, isu tinofanirwa gadzira backup yedata redu rese.
Kana tangogadzira iyo pendrive uye backup, isu tinobatanidza iyo pendrive kune komputa uye tangazve komputa. Isu tinoremedza iyo pendrive uye inotevera skrini ichaonekwa (mune ino gwaro isu tinoshandisa iyo kuisirwa pamushini chaiwo):
Mune ino kesi, isu tinosarudza sarudzo "Edza Trisquel usina kuiisa" iyo inotibvumidza kuyedza Trisquel uye kana zvese zvikashanda nemazvo, wobva wakwanisa kuzviisa.
Paunenge uchimhanyisa iyo yekumisikidza, inotevera skrini ichaonekwa
kwatinofanira kusarudza mutauro. Isu tinosarudza Spanish uye tinya bhatani re "Enderera".
Iye zvino tinosarudza sarudzo "Dhawunirodha zvidzoreso paunenge uchiisa Trisquel" Izvi zvinononoka kumisikidza asi zvinodzivirira zvikanganiso zvenguva yemberi. Tinodzvanya "Enderera" uye iyo yekuparadzanisa skrini ichaonekwa.
Zvakanakisa kuisiya sezvazvinoonekwa mumufananidzo, chii chinoita kuti tive nechengetedzo, yakachengetedzwa hard drive ine yakachena kuisirwa. Isu tinodzvanya bhatani re "Isa izvozvi" uye mafaera acho anotanga kuiswa apo Trisquel yekumisikidza screens ichaonekwa. Imwe yadzo mamiriro ezvinhu ekushandisa iwo marongero enguva:
Sarudzo inotevera ichave yekumisikidza keyboard.
Uye pakupedzisira isu tinofanirwa kuratidza mushandisi, zita remakomputa uye password yemushandisi (inozove superuser kana mudzi password).
Uye mushure meizvi, slideji inotanga nehurongwa hwekuteedzera nekugadzirisa mafaira.
Mushure mekumirira maminetsi akati wandei, kumisikidza kuchapedza uye skrini ichaonekwa ichikurudzira kuti titangezve komputa yedu. Isu tinozviita uye isu tichava neTrisquel seanoshanda system.
Chii chaunofanira kuita mushure mekuisa Trisquel?
Chimwe chezvinhu izvo isu tinofanirwa kuita mushure mekuisa Trisquel ndeye kugadzirisa iyo system, yeizvi tinovhura terminal uye toita zvinotevera:
Kana tangovandudza iyo inoshanda sisitimu, ipapo isu tichaenderera mberi nekumisikidza inoenderana neye software yatiri kuda. Trisquel kugovera kwakazara kwazvo uye nekuwedzera kuve neMATE sedesktop yayo huru, Tine zvirongwa zvakati wandei izvo zvimwe zvinogoverwa seUbuntu zvisina default, seVLC kana Gimp. Mapurogiramu maviri akakosha ekuridza vhidhiyo kana ekugadzirisa mifananidzo.
Iyo webhu bhurawuza uye email mutengi maforogo eMozilla Firefox uye Thunderbird, asi isu tinogona kuda chimwe chinhu chakafanana neChannel. Kune izvi tinogona kusarudza Chromium, yakasununguka sarudzo kunyangwe isingakurudzirwe zvakanyanya kana isu tine hanya nezve zvakavanzika. Muchiitiko chekuva nayo, isu tinovhura iyo terminal uye tinonyora zvinotevera:
Chimwe chinhu icho isu tichafanira kuisa ndeyeyekunakisa desktop theme. Mune ino kesi tinogona kusarudza iyo ARC artwotk. Mune ino kesi tinogona kuiisa nekushandisa inotevera kodhi mune iyo terminal:
sudo add-apt-repository ppa:fossfreedom/arc-gtk-theme-daily
Trisquel zvakare inobvumira kuiswa kwedoko. Mune ino kesi tinogona kusarudza Plank, doko rakareruka, rakananga iro riripo muTrisquel. Kuti tiite izvi, isu tinoita inotevera kodhi
Kana tikashandisa Java zvirongwa, ipapo isu tinofanirwa kumisikidza iyo chaiyo muchina, mune ino kesi isu tinopa inotevera kodhi
Kazhinji zvimwe zvinowedzera-uye zvirongwa zvinoiswa, asi Kana isu tikasarudza Trisquel ndeyefilosofi yayo yemahara software uye software isina chero chinhu chekupokana, saka hazviite zvine musoro kuwedzera zvimwe zvinhu kune ichi kugovera sezvo mune iyoyo tinofanirwa kushandisa Ubuntu MATE.
Chero zvazvingaitika, sezvawakaona, kumisikidzwa kwaTrisquel kuri nyore uye tinogona kuva nehurongwa hwesununguko hwakasununguka pasina kurasikirwa nekushanda kana rusununguko. Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Trisquel, kugovera KWEMAHARA kwakazara neSpanish mavambo
Ini ndamboishandisa mumaseva ekuve isina blob-isina kernel, yakajeka.
Gerard Espinosa akadaro
Kana ndichiteerera kumumhanzi, izwi rakabuda richiti handizive kuti ndeupi ruzivo. Ndakavhara rhythmbox uye izwi rikaramba richitaura x. Inobva kupi? Ungazvinyaradza sei? Zvikasadaro zvese zvakanyatsonaka.
Pamwe iyo "isina midzi faira system ... nezvimwewo" nyaya inofanirwa kujekeswa kana uchiisa, sezvo zvisiri pachena pekuisa iyo / sign yeamenzi seni.
Ehe: Ini handina kukwanisa kugadzira email nyowani account ne icedove, kana kusarudza Abrowser seye inosarudzika browser. Sezviri pachena iwe unofanirwa kugara wakasungwa kune akajairwa madhimoni masystem. Ndinoonga makomendi ako pamberi.
Pindura Gerardo Espinosa